Icala le-Price Price ne-Printer China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ku-Ifoni Yefoni,I-Roland Hambayo Case Printer,Iphrinta ye-Silicone Hambayo Case
Home > Imikhiqizo > Iphrinta ye-UV > Ifoni yephrinta yefoni > Icala le-Price Price ne-Printer
Icala lethu lefoni I-Printer yamukela uhlelo lokulawula ikhomputha ye-multi-axis. Umshini wokupakisha we- Silicone Phone Case ixhunywe kukhompyutha ngekhebula le-Ethernet. Uma nje izithombe ezenzelwe (izithombe) zibe ikhompyutheni, njenge: landscape, uhlamvu, imidwebo yendabuko yaseShayina, imidwebo yamafutha, imidwebo engenasici, ikhalligraphy kanye nemidwebo, ukudweba kwinki, i-gouache, izimbali, izinyoni, i-cartoon yonke engayinyathelisa icala lefoni / igobolondo / iseli ngqo; Ukusebenza kulula, okulula futhi okusheshayo, ukupuniza kuyomisa. Okukhiphayo okusheshayo, okuphumelelayo, okuguquguqukayo, kungabonisa ukuthungwa kombala, umbala we-gradient, umbala wombala ophakathi.
Inani eliphansi A3 uv iphrinta uhlobo lwe "non-contact" inkinobho jet uhlobo imishini digital, Case Hambayo nge Printer application is kakhulu kakhulu. Ukusebenzisa amadivayisi asekela i-UV inkinobho, ngaphezu kwendwangu ayikwazi ukuphrinta, cishe zonke ezinye izinto (ikhava yefoni, isikhumba, izimpawu, amabhokisi amancane, ukunikezwa kwamandla weselula, i-flash memory disk, ibhodi le-KT, itshe, i-gel silika, izinkuni, i-ceramic, i-crystal, i-acrylic, i-PVC, i-ABS njll.) impahla ingaba umshini wokunyathelisa umbala, uqedile ngokumelana nokumelana, ukumelana nokugqoka, ukumelana nokushayeka. Ukuze uzuze umqondo weqiniso we-seal, akukho ipuleti, u-spray owomile, isithombe esiphelele sombala.
1. Ukunambitheka komuntu ngamunye komuntu.Iphrinta efonini yefoni , uma nje uthanda, yenza ubunikazi befoni / shell / cell cell, ecacile nobuciko, phakamisa ibanga lakho.
Izici eziwusizo ze-Printer Case yethu ye- Roland Phone RF-A3UV:
3. Iphrinta yocingo ye-Silicone I-cartridge ineNenzwa yokuThola iNgeli yeNkinobho, uma inkinobho iphelile kuyobe ivusa;
Iphrinta ku-Ifoni Yefoni I-Roland Hambayo Case Printer Iphrinta ye-Silicone Hambayo Case Iphrinta yefoni yefoni Iphrinta yefoni yocingo yefoni Iphrinta ye-Epson Pen Iphrinta kuKhafi Intengo yephrinta yekholi yefoni